बिहानै नकारात्मक समाचार सुन्दा कस्तो लाग्छ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः कार्तिक १८, २०७६ - साप्ताहिक
अरूलाई जस्तै मलाई पनि नराम्रो त लागिहाल्छ नि ।
हरेक दिन यस्ता नकारात्मक समाचार पढ्दै आएको छु । अब त बानी परिसक्यो । अहिले त एकाबिहानै त्यस्ता समाचार सुन्नु परेन भनेचाहिँ अचम्म लाग्छ ।
यस्तो राम्रो देशमा कस्तो नराम्रो खबर ? यसमा कसको कमजोरी होला ? यस्ता कुरालाई हाम्रो देशले समाधान गर्नै नसकेको हो त ? भन्ने प्रश्न मनमा उठ्छ ।
अमर रञ्जित, खेलाडी
पहिलो कुुरा म त्यस्ता समाचार सुन्दै सुन्दिनँ, हेर्दै हेर्दिन यदि कहिलेकाहीँ सुनिहालें अथवा पढिहालें भने आफैं पोजिटिभ हुने प्रयास गर्छु ।
मेरो मनमा दिनभरि त्यही कुरा खेलिरहन्छ ।
त्यस्ता नकारात्मक समाचार सुनें वा पढें भने आजको दिन नराम्रो जाने भयो भन्ने हुन्छ ।
सकेसम्म कुनै पनि नकारात्मक कुरा बिहान मात्र होइन, कहिल्यै सुन्नु नपरोस् तर विडम्बना ! प्राय मिडिया भनूँ वा मानिसहरू नकारात्मक कुराकै खोजीमा हुन्छन् । उनीहरू नकारात्मक कुराहरू पढ्न, सुन्न वा सुनाउनमै उत्सुक हुन्छन् । खै किन हो ?
मनमा दिनभरि त्यही समाचार बजिरहेजस्तो लाग्छ । आफ्नो काममा पनि त्यसले बाधा दिइरहन्छ ।
एकाबिहानै नकारात्मक समाचार सुन्नुपर्‍यो भने चित्त दुख्छ । मलाई सधैं सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको हुन्छ । त्यसैले बिहानै नराम्रो समाचार सुन्दा मन दुख्छ ।
जिन्दगी यस्तै हो दु:ख र सुखको संगम, राम्रो र नराम्रोको खेल । त्यसैले बिहानै नकारात्मक समाचार सुन्नुपर्‍यो भने शान्त हुँदै प्रार्थना गर्छु ।
त्यो दिनभरि नै नकारात्मक सोच आइरहन्छ ।
नवराज पन्त, गीतकार
मनमा नरमाइलो लाग्छ । जिन्दगीमा मरेर लानु केही छैन भन्ने फिल हुन्छ । सकारात्मक सोच लिएर बाँचौं भन्ने लाग्छ । त्यस्ता समाचार सुनेपछि आफूले गरेका गल्तीहरू पनि सम्झन्छु ।
दिनेश काफ्ले, हास्यकलाकार
त्यो दिनभरि नै फ्रेस हुन सक्दिनँ ।
खासमा समाचार कस्तो हो, त्यसले प्रभाव पार्छ । म हरेक कुरालाई सकारात्मक रूपमा सोच्छु, त्यसकारण त्यस्तो धेरै टेन्सन हुँदैन । यदि मानवीय समवेदना, क्षतिको खबर हो भनेचाहिँ मन अमिलो भएर आउँछ, आँखा रसाउँछ अनि मन पोलिरहन्छ ।
नरमाइलो लाग्छ । त्यो दिन नै गतिलो हुँदैन । हरेक बिहान सकारात्मक कुराबाट सुरु गर्न मन लाग्छ तर कतिपय बिहान नकारात्मक समाचार सुनिहालिन्छ । त्यस्ता समाचारले दिनभरको काम बिथोलिन्छ ।
नकारात्मक समाचार सुन्नु वा पढ्नुपर्दा सुरुमा त त्यो समाचार साँचो नभैदियोस् जस्तो लाग्छ । यदि सत्य नै रहेछ भने त्यसको प्रकृतिअनुसार दु:ख व्यक्त गर्छु ।
निकै डर लाग्छ, अब केही भै पो हाल्ने हो कि भनेर ।
नकारात्मक समाचारले दिनभरि नै मन खाइरहन्छ ।
आत्तिन्छु । यस्ता घटना कसैप्रति नघटोस् भनेर मनमनै प्रार्थना गर्छु । बिहानै नकारात्मक समाचार सुने वा पढें भने दिनभरि राम्रोसँग काम गर्न सक्दिनँ ।
मन्जिल बस्नेत, मोडल
आजभोलि बरु सकारात्मक समाचार सुन्दा अचम्म लाग्न थालेको छ, हरदिनजस्तो बिग्रिएको, भत्किएको, तोडेको, फोडेको अनि घिनलाग्दा समाचारहरू नै बिक्ने चलन छ । नेताहरू मात्र होइन, हामी जनतामा पनि चेतना र संवेदनशीलताको कमी हुँदै गएको पाइन्छ ।
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, मर्निङ शोज द डे, तर जब दिनको बिहानी नै नकारात्मक खबर वा समाचारबाट हुन्छ, तब वाक्क, दिक्क, लाग्छ । नराम्रा खबर सुन्नु, पढ्नु नपरोस् भन्ने कामना गर्नु शिवाय अर्को विकल्प छैन ।
सकारात्मक समाचारले ऊर्जा, जोस एवं जाँगर दिन्छ भने नकारात्मक समाचारले निराश हुन्छु ।
यो देशमा राम्रो, सुखद समाचार नै हुँदैन, कि सञ्चारमाध्यमको ध्यान नकारात्मकतातिर बढी गएको हो ? भन्ने प्रश्न मनमा उठ्छ ।
नरमाइलो लाग्नुका साथै काम गर्ने मुड नै हराउँछ ।
बिहानी भनेको दिनको सुरुवात हो । त्यो अति खुसीको पल हुन्छ । कलिलो मन अनि कलिलो सोचका साथ नयाँ दिनको उदय भैरहेका बेला नकारात्मक समाचार सुन्दा नरमाइलो लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यो पलले दिन नै अन्धकारमय बनाउँछ ।
शरीर गलेजस्तो हुन्छ अनि नियतिलाई कसले थुनछेक गर्न सक्छ र भन्दै फेरि यस्तो नहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु ।
हिजोआज धेरैजसो विदेशमा कार्यक्रम परेकाले विश्वकै धनी राष्ट्रहरूको भ्रमण गरिरहेको छु । यसक्रममा ती देशहरूका बारेमा धेरै कुरा अनुभव गर्न पाइयो । ती देशका सबै जनता मनैदेखि खुसी भएको देखें, हरेक कुरा सरकारले बनाएको सिस्टममा चलेको छ । नेपालमा जस्तो हत्या–हिंसा त कल्पनाबाहिरको कुरा हो, कसैले साेंच्न पनि सक्दैन । दिनदिनै त्यस्तो घटना घटेको मैले कहिल्यै सुनिनँ । यता हाम्रो देशमा नकारात्मक समाचारलाई प्राथमिकता दिने क्रम बढ्दो छ । यस्ता खबर सुन्दा मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्छ अनि त्यो दिन नै उदास रूपमा बित्छ ।
ठ्याक्कै मनमा यही कुरा उठ्छ भन्ने हुँदैन । नकारात्मक पनि कस्तो खालको समाचार हो भन्ने हुन्छ । मनमा जस्तोसुकै कुरा खेल्न सक्छ । जे होस्, त्यो दिन मेरो आफ्नो काम भन्दा पनि कसरी भयो किन भयो भन्ने विषयमै मनमा कुरा खेलिरहन्छ ।
चक्र बम, गायक
प्रकाशित :कार्तिक १८, २०७६